November 4, 2021 - Babal Khabar
Nov42021 by बबाल खबरNo Comments
‘गर्भवती’ महिलाले याै’ न स म्बन्ध राख्दा के हुन्छ ? जान्नुस
भिडियो हेर्नुस, याै' न स म्प'र्क भने पुरुष र महिला दुबैमा चाहिने एक मनाेञ्जन हाे । लगातार यौ' न स म्प'र्क गरीरहँदा जब महि ना-वारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेक अप गराउँदा ग’र्भ रहेको जानकारी पाइन्छ । लगातार स म्पर्क गर्दा ग' र्भ'प 'तन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक भएकाले ग' र्भ अवस्थामा सम्प'र्क गर्दा अ'सर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन । भिडियो ग 'र्भा वस्थामा स-म्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने ग र्भवती महिलालाई अप्ठ्या'रो, अस'हजीलो हुनु भएन । त्यसैले जुन आ-सनमा स’म्प र्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आ’सनमा सम्प र्क गर्नुभयो भने महिला, बच्चा कसैलाई पनि अस'र हुँदैन । ग-र्भा वस्थामा महिलाको मनमा प्रेमका भावहरु बढि आउने हुँनाले त्यो कुरालाई जोडिले ख्याल राख्नु गरुरी हुन्छ । ब्लि डि'ङ हुने कारण भनेको ग 'र्भ'रहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा हुन
जानिराख्नुस, हरेक पु’रुष यस्तै यु’वतीको खोजीमा हुन्छन् !
हेर्नुस यो भिडियो, वि’वाह एउटा संयोग हो । वि’वाह अघि जे जस्तो भएपनि वि’वाहपछि श्रीमान् र श्रीमतीबीच उचित तालमेल हुनु आवश्यक छ । त्यसैले त नेपाली समाजमा भन्ने गरिएको छ, श्रीमान् र श्रीमती भनेका एकै रथका दुई पा’ङ्ग्रा हुन् । परिवाररुपी रथ हाँक्नका लागि दुबै पाङ्ग्राको जरुरी र महत्व हुन्छ । एउटा पा’ङ्ग्रा नभई रथ गुड्दैन । भिडियो, वि’वाहलाई ब’न्धन पनि भनिन्छ । त्यो ब’न्धन मायाको हो र जिम्मेवारीको पनि । वि’वाहलाई स’म्झौता पनि भनिन्छ । अलग पृष्टभूमीमा हु’र्किएका यु’वा र यु’वती जब द’म्पती बन्छन्, उनीहरुले आफ्ना कतिपय कुरामा स’म्झौता गर्नुपर्छ । आफ्ना कति रहर, इ’च्छा, आनीबानी, प्र’वृत्ति, व्य’वहार त्याग्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुँदैन । कलह मात्र हुन्छ । दा’म्पत्य कलहले दुई जनाको जीवन मात्र होइन, एउटा सिं’गो परिवार नै तहस–नहस बनाइदिन्छ । त्यसैले वि’वाह
पु’रुषलाई आफ्नो माया जा’लमा फ’साउन के स’म्म गर्दैनन् सु’न्दरी यु’वतीहरु
हेर्नुस यो भिडियो, मानिसको जीवनमा मिलन बि’छोड भन्ने कुरा सा’मान्य हो । तर बिछोडमा पु’रुषहरु भन्दा महिला बढी छ’टपटीने गर्छन् । प्रेममा धो’का खाएपछि म’हिलाहरू सबैभन्दा बढी के गर्छन् त भनी हालै गरिएको एक अ’नुसन्धानका क्रममा स’म्बन्ध टु’टेपछि म’हिलाहरूले आफ्नो सबैभन्दा बढी आफ्नो तौल घटाउने गरेको पाइएको छ । अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार प्रेम स’म्बन्ध टु’टेपछी प्राय म’हिलाहरू एक म’हिनामा २ देखी साढे २ किलो तौल घटाउँछन् ।अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार प्रेम स’म्बन्ध टु’टेपछी प्राय म’हिलाहरू एक म’हिनामा २ देखी साढे २ किलो तौल घटाउँछन् । बि’छोडपछि महिलाहरु ह्वात्तै मोटाउने भएकाले उनीहरुले पुन अर्को पु’रुषसँगको स’म्बन्धमा बस्नका लागी आफु आ’र्कषक देखिन यस्ता उपायहरु खोजीरहने गरेको र’हस्य उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यो पनि पढ्नुहोस हामी तपाईंहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ
सपनामा शा’रीरिक स’म्पर्क ग’रेको देखे के हुन्छ ?
हेर्नुस यो भिडियो, हरेक मानिसले सपना देख्ने गर्छन् । सपनाको प्रकृति भने फरक–फरक हुन्छन् । उसो त हरेक मानिसले हर दिन फरक–फरक प्रकृतिका स’पना देख्ने गर्छन्। मान्छेले वास्तविक जीवनमा पाउन नसकेका वा दबाएर राखिएका इ’च्छाहरू सपनामा प्राप्त गरेको कुरा दे’ख्छन । यसै गरी द’बेर रहेका यौ’नइ च्छा पनि सपनामा छ ताछुल्ल हुन्छ न् । भिडियो , विभिन्न अध्ययन अनुसार अधिकांश यु’वायुवती त्यस्तो सपना देख्न चाहन्छन्, पु’रुषले पहिलो पटक म’हिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त यो कुरा धेरै म’हिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि यु’वकको अपरिचित यु’वतीसँग आँखा जुध्छ । यु’वकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो यु’वतीको सिरदेखि पु’च्छार सम्म हेर्छ । पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पु’रुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला